मनाङमा बाढीपहिराका कारण तीन महिनादेखि सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध - DhanSanchar - Number 1 Digital Newsportal From Nepal
बिहिबार, भदौ ३१, २०७८ Thursday 16th September 2021
मनाङमा बाढीपहिराका कारण तीन महिनादेखि सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध
मनाङ । विकट हिमाली जिल्ला मनाङमा बाढीपहिराका कारण तीन महिनादेखि सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ ।
भत्किएका सडक मर्मत तथा निर्माणको काम नभएपछि यातायात, विद्युत्, सञ्चार क्षेत्र पूर्णरुपमा प्रभावित भएका छन् । लामो समयदेखि सडक सञ्जाल निर्माण नहुँदा दक्षिण कोरियामा रहँदै आएका मनाङको चामेवासी युवाको सहयोगमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर जलविद्युत्का सामग्री ढुवानी गरिएको छ ।
तीन महिनादेखि डुम्रे–बेँसीशहर–चामे सडकखण्ड पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ । सडकमार्फत् सवारीसाधन मात्रै नभई बटुवासमेत आवतजावत गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । लघु जलविद्युत् आयोजनामा निर्भर मनाङमा उज्यालोका लागि युवाले सहयोग पु¥याएका छन् ।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिएको विद्युत्मा पनि बाढीपहिराले क्षति पु¥याएको छ । बाढीपहिराले क्षति पु¥याएको जलविद्युत् मर्मतका लागि हेलिकप्टर चार्टर गरी आवश्यक सामग्री ढुवानी गरिएको समाजसेवी विनोद लामाले जानकारी दिनुभयो ।
चामे लघु जलविद्युत् आयोजना मर्मत तथा सम्भार र निर्माणका लागि हेलिकप्टर चार्टर गरी आवश्यक पाइपलगायत सामग्री ढुवानी गरिएको लामाले बताउनुभयो । हेलिकप्टरमार्फत बेँसीशहरबाट सदरमुकाम चामेसम्म उक्त सामग्री ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहको सहजताका लागि सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ तर सरकारी कामकाजका लागि सहज भए पनि सर्वसाधारण हालसम्म पनि अन्धकारमा रहँदै आएका छन् । चामेवासीलाई लघु जलविद्युत् आयोजना मर्मत भएपछि बिजुलीको उपलब्ध हुनेछ ।
लामो समयसम्म सौर्य ऊर्जाले धान्नसक्ने अवस्था नरहेकाले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका चामेवासीले सहयोग पु¥याएको चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घलेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरियमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सदरमुकाम चामेदेखि भ्राताङसम्म विसं २०७७ माघमा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् आपूर्ति भएको थियो । मनाङमा लमजुङको मस्याङ्दी–५ घेर्मुस्थित राधी साना जलविद्युत् आयोजनामा निर्मित सवस्टेसनबाट २९ किलोमिटर तार टाँगेर ३३ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन चामे–१ स्यार्कुस्थित सवस्टेसनमा जडान गरिएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख इञ्जिनीयर मिलन सुवेदीले लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीपहिराले मनाङस्थित प्रसारण लाइन मर्मत कार्य थालिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बाढीपहिराले प्रसारणमा एक करोड ७० लाख बराबरको क्षति पुगेको छ ।
बाढीपहिराले ३३ केभी लाइनको ८.४ किलोमिटरको ११६ वटा खम्बा, ५.६ किलोमिटरको ११ केभी लाइनको ८८ वटा खम्बामा क्षति पु¥याएकोे छ । चार सय भोल्टको ५१ खम्बामा क्षति पुगेको सुवेदीले बताउनुभयो । यी स्थानमा हेलिकप्टरबाट मात्रै सामग्री ढुवानी गर्न सकिने भएको छ ।
के तपाईको ओठ कालो छ ? यस्ता छन् कालो ओठ सुन्दर बनाउन सरल उपाए
व्र्यसनसहित एचआइभी घटाउन अभियान
दाँत किन हुन्छ पहेँलो र कालो ? यस्ता छन् दाग हटाउने उपाय